ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအဆင့်ဆင့် – Page2– BurmeseHearts
ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၂၈)ပတ်မှ (၃၁)ပတ်အတွင်း ကလေးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုဟာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ?
ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၂၈)ပတ်မှ (၃၁)ပတ်အတွင်းမှာ ဗိုက်ထဲက ကလေးလှုပ်ရှားတာ အကြမ်းဆုံးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ တခါတရံ မိခင်လောင်းတောင် နာကျင်သွားတဲ့အထိ ဗိုက်ထဲက ကလေးလှုပ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ သန္ဓေသားရဲ့ ဒီလို ကြမ်းကြမ်းတမ်းလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့် မိခင်မှာ မသက်မသာခံစားချက်မျိုးလည်း ဖြစ်ပေါ်စေတယ်။
ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၂၈)ပတ်မှ (၃၁)ပတ်အတွင်း ခြေ ၊ လက်တွေ ယောင်လာတတ်သလား?
ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၂၈)ပတ်မှ (၃၁)ပတ်အတွင်း လက်မောင်းတွေ ၊ ခြေထောက်တွေ ခဏ ၊ ခဏ ယောင်လာနိုင်တယ်။ မနက်ကအကောင်း…
ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၂၈)ပတ်မှ (၃၁)ပတ်အတွင်း မိခင်ဟာ ဗိုက်က အဆီတွေတက်လာပါတယ်။ ဒါဟာ သန္ဓေသားကို…
ကလေးမလှုပ်ဘူးလို့ သံသယရှိရင် ကလေးလှုပ်ရှားမှုရှိ ၊ မရှိ ဘယ်လို စမ်းသပ်သင့်သလဲ?
ကလေးမလှုပ်ဘူးလို့ သံသယရှိရင် ရေအေးအေးလေး သောက်ပြီး သူ့လှုပ်ရှားမှု စောင့်ကြည့်ပါ။ ရော့ခ်လို…
ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၂၄)ပတ်မှ (၂၇)ပတ်အတွင်း ကလေးကာ ပိုသန်သန်မာမာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး လှုပ်ရှားလာနိုင်ပြီး ခဏ ၊…
ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၂၄)ပတ်မှ (၂၇)ပတ်အတွင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းဟာ ဘာတွေ…
ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၂၄)ပတ်မှ (၂၇)ပတ်အတွင်း မှာတော့ ဟော်မုန်းတွေဟာ ဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီး ဗိုက်ကလည်း ပူသထက်…
ကိုယ်ဝန်ရက်သတ္တပတ် (၂၀)ပတ်မှ (၂၃)ပတ်အတွင်းရောက်လာတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းတွေ…
ကိုယ်ဝန်ရင့်လာတဲ့မိခင်လောင်းဟာ စိတ်ကြည်သာပျော်ရွှင်နိုင်မယ့် သီချင်းခပ်အေးအေးလေးတွေ နားထောင်ခြင်း ၊ ကလေးအတွက်…
ကိုယ်ဝန်ရက်သတ္တပတ် (၂၀)ပတ်မှ (၂၃)ပတ်အတွင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတဲ့ ဇနီးကို…
ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၂၀)မှ (၂၃)ပတ်အတွင်း ရောက်လာရင်ဖြင့် သင့်ဇနီးဟာ ဗိုက်သိသိသာသာထွက်လာပြီမို့ …
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တုန်း ဆံပင်ကျွတ်သက်သာအောင် နို့နဲ့လုပ်ထားတဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ ဆံပင်တွေကို ဂရုတစိုက်…
ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၂၀)ပတ်မှ (၂၃)ပတ်အတွင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းဟာ ဘာတွေ…
ကိုယ်ဝန်ရင့်လာတာနဲ့အမျှ သွေးအားမြင့်တက်လာတတ်ပါတယ်။ နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်လာပြီး အမောအပန်းမခံနိုင်တာတွေ ၊…